KwiNdlu IiNkonzo zasekhaya
Isinyithi ngumsebenzi wendlu oyimfuneko kuyo yonke indlu. Kodwa, njengawo nawuphi na ubuchule, insimbi ingaphula okanye ingagqityi, kwaye ngoko umba wokuthenga isitsha esitsha sokwenza i-ironing iphakanyisiwe. Kwaye kubonakala ngathi, kunzima ntoni? Nangona kunjalo, ixesha alimi, kwaye iimarike zanamhlanje zinikela ngemimiselo ngemisebenzi eyahlukileyo. Kuthi malunga nensimbi kunye ne-steamer.
Isinyithi ngesitya se-steamer senzelwe ukugcina iindleko zomsebenzi zabanikazi. Ayikho imfihlo yokuba izinto zokugaya izinto ezincinci (iingubo zelinen, iikhati) - akunjalo. I-jet ye-steam ephuma kwisitya-sinyithi se-iron ivula izibonda zendwangu, iyancityezela, kwaye ngoko ke, ukululaza iifumba kuba lula. Ngokubanzi, imbono yokusebenzisa i-steamer kwimpilo yemihla ngemihla ivela ekucocweni komileyo. Isixhobo esibukeka sifana nesicoceko sokucoca (isitya kunye neTEN) kunye ne-brush ephawulekayo, apho i-steam eshushu ifumana khona. Iintlobo zeenqwelo-mveliso zentlambo ziquka:
ukunika isinyithi (xa kuthelekiswa nentsimbi eqhelekileyo);
i-ironing ngaphandle kwebhodi lokutshiza;
ukutshala kweendawo ezinzima ukufikelela kunye nezindwangu ezintle;
ukuba kunokwenzeka ukususa amabala, ukuvumba okungajabulisayo, kunye nokutshabalalisa izicubu.
Nangona kunjalo, i-iron-steamer ayikwazi ukuvelisa i-ironing evamile.
Indlela yokukhetha i-iron-steamer?
Ukuba unquma ukuthenga loo "fowuni" efunekayo ekhaya lakho, sincoma ukuba uqwalasele iinkalo ezininzi zefowuni. I-steamer kwifomu yayo ecocekileyo ifana ne-vacuum cleaner. Yisisombululo esinamandla esinomsebenzi ovelisa i-ironing kunye nokucocwa okuncinci nje kuphela kweengubo kunye namakhethini, kodwa kunye nefenitshala kunye namaphephethi. Kufakwe kwisithambiso sineziqwenga zeemikhono, iimpahla ezixhomayo, iintlobo ezininzi ezinamathiselweyo: i-nap ehlukeneyo yefenitshala, iguqa iimpahla kunye namakhethini. Isixhobo esinjalo sivelisa i-ironing ebonakalayo.
Kodwa iimarike zanamhlanje zibonelela nge-iron-steamer yokunxiba iimpahla. Kubukeka ngathi yintsimbi yesayizi encinci okanye ibrashi ephethe intambo yombane. Izixhobo ezinjalo ze-compact zikulungele ukusetyenziswa kwekhaya, kuba abazithathi indawo enkulu. Bangakwazi ukuthathwa kunye nawe kwindlela yokushishina okanye kwiholide, okuya kukunceda uhlale ukhangelekile. Enyanisweni, amathuba okutshintshwa kwesebe-steamer encinci awanqongophele kakhulu: ayenokuthi ayitye iingubo kunye namakhethini, ifenitshala kunye neetampu azikho phantsi kwayo. Ewe, namandla Idivaysi ephathekayo iyancitshiswa.
Ngokuqhelekileyo, abathengi abanokukhetha phakathi kwe-generator ye-steam ngensimbi okanye i-steamer. Iyokuqala iyinyithi eqhelekileyo, exhunywe yiphubhu ene-container ehlukeneyo ngamanzi. Injongo ephambili yinto yokwenza i-ironing, igcwaliswe ngoncedo lwentsimbi engenayo. I-steamer isetyenziselwa umlinganiselo omkhulu wokucoca kwi-contamination, disinfection, kwaye, ekugqibeleni, kodwa ukugqithisa, ukugqithisa i-folds. Okukhethiweyo kukukho.
Ukuba usenokucamngca, qwa lasela insimbi kunye ne-generator ye-steam kunye nentsimbi ene- steam.
I-Condensate kwisitya yangasese
I-Ultrasonic ihlamba iziqhamo
I-Saucepan ye-cooker cooker ye-gas cooker
Ithemishoni yeThermo yokugcina imifuno
I-Brazier eyenziwe yensimbi engenasici
Imouse engenantambo ayisebenzi
Unokukhetha njani ibha ye candy?
Umgcini wephepha lokukhusela kunye nomoya wokuhlaziya
Ungakhetha njani umshini wekhofi ekhaya?
Umculi uKaty Perry waqala ngokuqokelela izicathulo
Iiphotole malunga nama-superheroes
Iibhokhwe zezinja kwindawo
Izambatho zangaphandle zehlobo
Umgangatho wezakhiwo zobugcisa
I-PBK 20 yokulahleka kwesisindo
UBeyonce kwiingubo ze-emerald kwi-konsathi yokunceda e-New York
I-Trichomonas colpitis - iziyobisi kunye namakhambi okunyanga okukhawuleza
Uluhlaza kuphi i-blueberry?
Kalina - ukutyala nokunyamekela
UMacaulay Culkin ubonakala kwisikrini kwendima engalindelekanga
Indawo yasekwindla - ukudweba kwabantwana
Yintoni enxiba iingubo eziluhlaza okwesibhakabhaka?
Umntwana unomlenze emva kweDPT
Kutheni umntwana ephethe igazi ekhaleni?
Indlu yaseBritney Spears kunye neBrittany Murphy ngasekupheleni kweevenkile
I-postcream carrot ye-carrot - zokupheka ezingaqhelekanga ngokutya okulula ngaphandle kwenyama kunye namaqanda